Accelerated Nghọta: Predictive Testing for Direct Mail | Martech Zone
Tupu m gawa dijitalụ, arụrụ m ọrụ na akwụkwọ akụkọ na ileta akwụkwọ ozi. Ọ bụ ezie na akwụkwọ akụkọ agbalighị ịmalite ma ọ bụ gbanwee oge iji jigide njikwa ego ha na-emefu mgbasa ozi, akwụkwọ ozi na-aga n'ihu na-ebute nsonaazụ dị egwu. N'ezie, m ga-arụ ụka na ọtụtụ mkpọsa ahịa ahịa na ozi ziri ezi nwere ike ịbawanye ntị - na-agbaji mkpọtụ nke dijitalụ. Nke bụ eziokwu bụ na, mgbe m ga-esi ọtụtụ narị ozi ịntanetị na ọkọlọtọ ịkụ m kwa ụbọchị, M ga-esi nnọọ ole na ole kpọmkwem ozi iberibe… na m na-ele ha niile.
Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ndị na-ajụ ase, agbanyeghị, ozi ozigbo chọrọ mmụba na njikarịcha na-aga n'ihu. N'iburu ọnụ ahịa akwụkwọ ozi, ọtụtụ ndị na-ere ahịa enyefela n'aka ndị na-ajụ ase maka nke a ma kwaga na usoro dijitalụ na-adịchaghị ize ndụ. Ọ bụ ihe nwute… ebe na-eche ihu ụfọdụ atụmanya a kacha mma emezu site na omenala ndị na-ajụ ase.
Gịnị ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịnwale mkpọsa ozi gị na-akwụghị ụgwọ ahụ?
Quad / Graphics amalitela nyocha ikpo okwu nyocha nke na-eji nyocha amụma iji nwalee ngwa ngwa na usoro na-enweghị nzipu ozi anụ ahụ. A na-akpọ ya Ihe omimi ma ọ nwere ike nwalee ihe ruru 20 mgbanwe mgbanwe n'otu ngafe. Ọ na-eji ọkaibe onye ọ bụla matrix na-agwakọta igwe mmadụ na mmetụta uche ịkọ ihe ndị na-akpali mmadụ ime ihe na-enye.
Ná nkezi, Accelerated Insights enyerela ndị na-ere ahịa aka ịnapụta:
Otu pasent 18 ruo 27 bulie na nzaghachi udu
Dabere arụpụta na ụbọchị 60 vs. otu na afọ abụọ maka ule ọdịnala
A Pasent 90 na-ebelata na ule na-akwụ ụgwọ
A na-emezu ihe a niile na-enweghị izipu otu mpempe akwụkwọ ozi anụ ahụ. Ikpo okwu, nke a na-akpọ Accelerated Insights, na-ekwenye na amụma nnwale bụ pasent 97 ziri ezi (+//- 3 pasent), na-eme ka a rụpụta nsonaazụ nyocha na ule ndụ. Ndị otu ahụ etinyela ma nwalee usoro a n'ọtụtụ ụlọ ọrụ:
National Nchekwa onwe - Accelerated Insights buru amụma ịrị elu 23 percent na nzaghachi ọnụego, mmụba n'ezie bụ 25 pasent.
National Telecom - Belata usoro nyocha ya site na 55 pasent mgbe Accelerated Insights buru amụma ziri ezi nke ihe kachasị emetụta nzaghachi
Onye na-ere ahịa akpụkpọ ụkwụ pụrụ iche nke mpaghara - 32 pasent bulitere na nzaghachi nke gosipụtara usoro ntọala nke ụlọ ọrụ KPI ma ọ dịkarịa ala 200 pasent. Companylọ ọrụ ahụ tinyere ojiji nke Accelerated Insights persona matrix na ọwa ahịa niile
Nkwado Ndụ Ndụ Mba - Accelerated Insights buru amụma na pasent 18 na-ebuli na nzaghachi na mmụba ahụ bụ pasent 19
Tags: nghọta nghọtaozi ederedeamụma amụmaNyocha uleahia ahianchịkọta amụmaamụma ị ga-ebu amụmaQuad / Graphicsanwale kpọmkwem mail